मिरर गरिएको भित्ताहरू दृश्यरूपमा बाथरूम विस्तार गर्नुहोस् सजाउनुहोस्
बाथरूम सजावटको लागि ऐना भित्ताहरू
ऐना सीमित स्थानहरूमा ठाउँ प्राप्त गर्न तिनीहरू एक उत्तम उपकरण हुन्। रणनीतिक ठाउँमा अवस्थित ठूला दर्पणहरू गहिराईको भावना बढाउने क्षमता राख्छन्, दृश्य कोठा विस्तार गर्न मद्दत गर्दछ। बाथरूमलाई दृश्यात्मक रूपमा विस्तार गर्न तिनीहरूलाई किन प्रयोग नगर्ने?
Si buscas नेत्रहीन आफ्नो कोठा ठूलो बाथरूममा, एक वर्ग वा आयताकार फ्रेमलेस ऐना जुन छतबाट भुईंमा सम्म जान्छ तपाईंको उत्तम सहयोगी बन्छ। उही मिररले बाथरूममा प्रकाश बढाउन र यसलाई अधिक व्यावहारिक बनाउन पनि योगदान पुर्‍याउँछ।
साझेदारी बाथरूममा, सबैजनाले ऐनामा एउटा टुक्रा माथि लड्छ। ठूलो आयाम मध्ये एक शर्त छ कि सानो दैनिक असुविधा मात्र बचाउन मद्दत गर्दैन सौंदर्य कोठा को विस्तार र एक हासिल ठूलो प्रकाश। र उत्तरार्द्ध आज हाम्रो उद्देश्य हो।
हामी कस्तो प्रकारको ऐना खोज्दैछौं? हाम्रो उद्देश्यहरू पूरा गर्न, उत्तम विकल्प भनेको ऐनामा शर्त लगाउनु हो ठूलो फ्रेमलेस छत देखि फर्श सम्म सम्पूर्ण पर्खाल ढाक्न। पहिलो छविमा हेर्नुहोस्; जब ऐनामा भुँइमा पुग्दैन, गहिराइको अनुभूति हराउँछ।
हामी ऐना कहाँ राख्छौं? हामीले ध्यानमा राख्नु पर्छ कि ऐना विपरित पर्खाल प्रतिबिम्बित गर्दछ र यो छवि बढाइनेछ। त्यसकारण, यसलाई सफा र व्यवस्थित पर्खालको अगाडि राख्नुपर्दछ, जसमा निश्चित "अनुग्रह" छ। सब भन्दा चाखलाग्दो स्थानहरू विन्डोको अगाडि सुन्दर बाहिरी दृश्यहरू सहित छन्।
यो पर्खाल सि s्कसँग मिल्दोजुल्दो बनेको छ, ताकि हाम्रो उद्देश्यहरू प्राप्त गर्नका साथै यो व्यावहारिक हो। यस अन्तमा, आवर्धक क्षेत्र पनि सामान्यतया ऐनामा थपिन्छ; एक तत्व जुन हामीले खातामा लिनुपर्दछ, यसको लागत बढाउनेछ। सि the्क को रूप मा, राम्रो छ यदि हामी एक शर्त साधारण रेखाका साथ फ्लोटिंग डिजाइन; यो दर्पण पर्खाल राख्न बेकार हुनेछ र यसलाई कभर।
के तपाईलाई बाथरूममा ऐनामा भित्ता राख्ने विचार मनपर्दछ?
लेखको पूर्ण मार्ग: मुख्य पृष्ठ » स्पेसहरू » बाथरूम » बाथरूम सजावटको लागि ऐना भित्ताहरू
गर्मी भान्सा बाहिर
मेक्सिकन टचको साथ आधुनिक शैली कसरी सजाउने